Accountant | Hub Myanmar Company Limited ﻿
1.8.2019, Full time , Media / Publishing
Company: Hub Myanmar Company Limited
Hub Myanmar Company Limited would bealearning environment for the employees who want to develop their careers.Hub Myanmar Company Limited publishes Myanmar B2B Management Magazine, organizes BFBM Seminars and provides other Corporate Solutions.
•	ဆက်ဆံရေးပြေပြစ်ကောင်းမွန်ပြီး အများနှင့်ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်နိုင်ရမည်။
•	Computer Word, Excel ကျွမ်းကျင်စွာ အသုံးပြုနိုင်ရမည်။
•	LCCI (III)/Excel ရရမည်။
•	အတွေ့အကြုံ ၂နှစ် ရှိသူဖြစ်ရမည်။
Work location Bld 24/26, Rm 4B/C, South Race Course Street, Tamwe Township, Yangon 11211
Company Industry: Media/Publishing
Job posted: 1/8/2019
5 Days, Full time , Media / Publishing
•	Management Skill အထူးကောငှးမှနသှူဖှဈရမညှ။ Digital Marketingကိုနားလညသှူဖှဈရမညှ။ •	Sale Target ကို ကောငှးစှာမောငှးနှငနှိုငသှူ။ •	Customer relationship management နှငှ့ Problem solving Skill ရှိရမညှ။ Leadership Skill ကောငှးမှနသှူဖှဈရမညှ။
Hub Myanmar Company Limited would bealearning environment for the employees who want to develop their careers.
Hub Myanmar Company Limited publishes Myanmar B2B Management Magazine, organizes BFBM Seminars and provides other Corporate Solutions.
•	အခှနှဥပဒအတေိုငှးအခှနကှိဈစမှားကိုဆောငရှကနှိူငရှမညှ။ •	Financial Accountant လခှုပရှေးဆှဲနိူငရှမညှ။
•	ကုမပြဏီမှ ထုတလွုပထွားသော Online Platform & App ကို Top Management ၏လမွးညှနခွကွှမှား နှငွ့ အညီ Target မှားကို အခှိနမွီပှီးမှောကအွောငွ လုပဆွောငရွမညွ။
Busines Development Executive
•	English4Skills •	ရနကှုနမှို့တှငှးသှားလာနိုငရှမညှ။ •	Fresh graduate မှားလညှးလှောကထှားနိုငပှါသညှ။
Team Leader ( Sales )
99 Days, Full time , Media / Publishing
•	သက်ဆိုင်ရာ ကုမ္ပဏီများသို့ သွားရောက် မိတ်ဆက်ပြီး အရောင်းတက်အောင် Sales Target များ ပြည့်မီအောင် ဆောင်ရွက်နိုင်ရမည်။ •	Customer များ၏ လိုအပ်ချက်များကို သဘောပေါက်နားလည် ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ပြီး Customer များနှင့် ကောင� ...
114 Days, Full time , Media / Publishing
•	Corporate Sales Target ကိုပြည့်မီအောင်လုပ်နိုင်ပြီး B2B selling မှာ အတွေ့အကြုံ အနည်းဆုံး ၅ နှစ်ရှိရမည်။ •	Clients နှင့်ကောင်းမွန်စွာ relationship လုပ်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ •	ခရီးထွက်နိုင်ရပါမည်။ Event များစီစဉ်နိုင်ရမည်။
134 Days, Full time , Media / Publishing
•	အာမခံလုပ်ငန်းပိုင်းကို ဦးစီးဆောင်ရွှက်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ •	ဆက်ဆံရေးပြေပြစ်ကောင်းမွန်ပြီး အများနှင့်ဆက်ဆံရေးပြေပြစ်ကောင်းမွန်ရမည်။
•	Customer တွေနဲ့ ရေရှည်ဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်ပြီး clients တွေရဲ့ လိုအပ်ချက်ကို စွမ်းဆောင်ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သူတစ်ယောက်ဆိုရင် Key Account Executive ရာထူးကို လျှောက်ထားလို့ရပါပြီ။
•	ဆက်ဆံရေးပြေပြစ်ကောင်းမွန်ပြီး အများနှင့်ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်နိုင်ရမည်။ Team Leader ( Marketing & communication)
Marketing & Communication Team Leader
•	Proposal ၊ Agreement ၊ Report နှင့် Presentation များ ပြင်ဆင်ရန် •	သက်ဆိုင်ရာ Marketing Activity နှင့် Campaign များ ပြုလုပ်ရန် •	Clients များနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ရန် •	Event ပွဲတွေကိုကောင်းစွာ Handle လုပ်နိုင်ရမည်။ •	Media အဖွဲ.အစည်းများ၊ Influencer , Clients, government နှင ...
•	ရန်ကုန်မြို့တွင်း သွားလာနိုင်ရမည်။ •	ဆက်ဆံရေးပြေပြစ်ကောင်းမွန်ပြီး အများနှင့်ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်နိုင်ရမည်။ Sales supervisor / Sales Ececutive
184 Days, Full time , Media / Publishing
•	Event များ၊ Product Launching ပွဲများတွင် ရိုက်ကူးတည်းဖြတ်ရန်Company လိုအပ်ချက်အရ ပေါ်ပေါက်လာသောအစီအစဉ်များ၊ ပွဲများအတွက်ရိုက်ကူးတည်းဖြတ်ခြင်း များပြုလုပ်ရန်။ •	Creative ကောင်းမွန်သူ ၊ အချိန် ၊နေရာ မရွေး အဖွဲ့အစည်းနှင် ...
•	Social media tools တွေကို နားလည်တဲ့သူဖြစ်ပြီး အခြားသော social media platform တွေဖြစ်တဲ့ Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram & Google tools တွေကို ကောင်းစွာ အသုံးပြုနိုင်သူ ဖြစ်ရပါမယ်။
Accountant Accountancy Jobs Joblesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss JobsInYangon Hub Myanmar Co.,Ltd Accountancy Jobs Accountancy Jobs Media/Publishing Jobs in Myanmar, jobs in Yangon
Work in Yangon (Rangoon)(8882)
Work in Yangon Region(1783)
Dagon Glory Co., Ltd.(551)
Big Impact Media Co., Ltd
Ingyin Hmwe Trading Co.,Ltd.
Magway Region3Days